Ngokusho kokukhangisa kwe-MDG، i-37٪ yabasebenzisi be-Facebook bazibandakanya ngokugcwele nokuthunyelwe okunesithombe esifakiwe؛ kanye ne-67٪ yamakhasimende athi ikhwalithi yesithombe somkhiqizo iyabasiza ukuthi banqume ukuthi bawuthenge noma cha. Enye yezizathu zokuthi amasayithi anjengePinterest adume kakhulu ukuthi abantu bathola izithombe zihlanganyela. Cishe uke wezwa kuthiwa isithombe “singamagama we-1000”. Lokhu kuyiqiniso ngoba abantu baqhutywa ngumbono.
Ukubaluleka kwesithombe – i-67٪ yamakhasimende athi ikhwalithi yesithombe somkhiqizo iyabasiza ukuthi banqume ukuthi bawuthenge noma cha. I-infographic egcwele lapha.
1 Kungani Kufanele Ufake Izithombe KuBhulogi Lakho
2 Ukuqonda i-Copyright nokusetshenziswa okulungile
2.1 Lapho Abanye Abanikazi Bewebhusayithi Beba Ngenkinga
2.2 Ukutholaphi izithombe okulungile ukusebenzisa
2.3 Xhumana nomthwebuli wezithombe zangempela
3 Kuyini Ukusebenzisa Okuhle?
4 Imithetho Ingashintsha
Kungani Kufanele Ufake Izithombe KuBhulogi Lakho
Ngokusho kukaMashi kaMarkark، ucwaningo lwe2014 ngezinhlobo zokuqukethwe okuthunyelwe ku-Facebook، izithombe zenza cishe i-75٪ yokuqukethwe okuthunyelwe futhi kwabelwane ngakho ekhasini le-Facebook. Lezo zithombe ezifanayo zinamanani wokuxhumana we-87٪ kusuka kubasebenzisi be-Facebook.
Ngenkathi izivakashi zakho zesayithi ngokuqinisekile zingalindele ukubona izithombe kuphela lapho zivakashela ibhulogi yakho، impumelelo yezithombe ezisekwe ezithombeni ku-Facebook، Twitter nakuazi baku.
Ukuqonda i-Copyright nokusetshenziswa okulungile
Abaningi odala إلى الأخلاق ، kubhekwa njenge-Copyright. Ngokuqinisekile، ungakwazi ukubhalisa إلى ne-US Office Copyright Office ukuze uthole ukuvikeleka okwengeziwe futhi nekhono lokuthola noma iyiphi inzuzo elahlekile، kodwa uma uyidala، in ingeyakho.
Lokhu kuhlanganisa kepha akukhawulelwe ku:
Lapho Abanye Abanikazi Bewebhusayithi Beba Ngenkinga
Abanye abantu akusho ukwephula amalungelo obunikazi. Abakuqondi nje ukuthi isebenza kanjani، kufaneleke kahle، bathole imvume nokuthi yini engasetshenziswa futhi engenakusetshenziswa. Kukhona nezindawo eziningi ezimpunga ngaphansi kwemithetho.
Lapho abanye abanikazi bewebhusayithi bethola ubunzima ngezithombe ukuthi bamane basesha ukusesha okuthi “izithombe zezinja ezinhle” bese bekopisha isithombe sokuqala abasibonayo ukuthi bayasithanda. Kodwa-ke، isithombe kungaba yinye umthwebuli wezithombe angafisi ukusaba kwamanye amawebhusayithi. I-Copyright yakhe isanda kwephulwa.
Ukutholaphi izithombe okulungile ukusebenzisa
Ngenhlanhla، kukhona abathwebuli bezithombe abafuna ukukunikeza izithombe ongazisebenzisa kusayithi lakho (ekubheka ukuthi uyazikweleta ngokufanele). Kunezingosi ezimbalwa lapho ungathola khona lezi zithombe ezingasetshenziswa uma nje uzikweleta. Lezi zindawo zifaka:
Izithombe Zesidlangalaleni Zomphakathi (njengeziningi ezinqolobaneni zoHulumeni zase-US، kodwa njalo zihlole kabili ukuthi ungayisebenzisa)
Ama-skrini weskrini sakho sesiphequluli
Kukhona nabathwebuli bezithombe ababelana ngezithombe zabo kumasayithi wesitoko. Lezi yizithombe lapho ungathenga khona ilungelo lokusebenzisa isithombe ngenhloso ebekiwe nendawo.
Isibonelo، ungathenga amalungelo wokusebenzisa isithombe kuwebhusayithi yakho kuphela. Uma ufuna ukushicilela incwadi bese usebenzisa isithombe esifanayo، kuzodingeka ukuthi ubuye emuva uyothenga amanye amalungelo.
Izithombe ze-Stock zivame ukuba yizinga eliphezulu kakhulu. النازية ezinye izayithi ezinikeza izithombe zesitokwe ezithengiswayo:
Ngemibono engaphezulu، hlola isihloko sikaJerry Low I-20 + Imithombo Yemifanekiso Yamahhala Yobhulogi Bakho.
Xhumana nomthwebuli wezithombe zangempela
Uma ungakwazi ukuthola isithombe osifunayo kunoma isiphi isiza esingenhla، ngoba sicacisiwe ngokwedlulele، kufanele uthinte umnikazi wesithombe bese uthola imvume yokusebenzisa isithombe esizeni sakho. Abanye abathwebuli bezithombe bazokuvumela ukuthi ulisebenzise ngesixhumanisi sokubuyela emuva nekhredithi kubo. أباني بازوتي تشا.
Uma umthwebuli wezithombe uthi ungasebenzisa isithombe، gcina i-imeyili endaweni ephephile uma kwenzeka kukhona umbuzo mayelana nokuthi uvumelekile ukuyisebenzisa.
Kuyini Ukusebenzisa Okuhle?
Ukusetshenziswa okulungile kuwela ngaphansi kwe-Copyright Act (Isihloko 17 sekhodi yase-United States) futhi kunesimo sokuhlolwa kwe-litmus ngezici ezine zokunquma ukuthi kulungile yini ukusebenzisa ingxenye yomsebenzi we- حقوق الطبع والنشر. Ngokuyinhloko، uma umsebenzi ujwayele futhi umuntu uyisebenzisa esimweni esingokomlando، bese usebenzisa ingxenye yayo kungase kube efanele. Kodwa-ke، kuyinkimbinkimbi futhi ungase uphathe iphutha ngokuthi ngabe ukusetshenziswa kulungile yini noma cha futhi kuphephile enkingeni yomthetho.
Ngokusho kweHhovisi le-Copyright، lezi zici ezine ziyi:
Inhloso kanye nomlingiswa wokusetshenziswa، kufaka phakathi ukuthi ukusetshenziswa okunjalo kungokwemvelo noma kungenxa yezinhloso zemfundo ezingenzi nzuzo
yena uhlobo lomsebenzi we-Copyright
ukulinganisa nokulingana kwesigaba esetshenziselwa ngokuphathelene nomsebenzi we-Copyright njengamanye
umphumela wokusetshenziswa emakethe okungenzeka، noma ukubaluleka komsebenzi we-Copyright
Ukusetshenziswa okulungile kufinyelela ekudlalweni okuningi ngombhalo obhaliwe. Isibonelo ، uma ufuna ukucaphuna kulesi sihloko ، ungase ufake i-quote emfushane bese uyikweleta. ناسي إسيبونيلو:
Esihlokweni se-WHSR esithi "Ungayisebenzisa Le Sithombe؟ Ukuqonda Ukusebenzisa Okuhle nokuthi Yiziphi Izithombe Angeke Zisetshenziswe Ngokusemthethweni Kubhulogi Lakho "nguLori Soard، uyeluleka," المصور Uma lo ethi ungasebenzisa isithombe، gcina i-imeyili endaweni ephephile uma kwenzeka kube khona umbuzo mayelana nokuthi ngabe uvunyelwe ukuyisebenzisa. "
Lokho kucaphuna esifushane، kufakwe kumthombo wokuqala futhi kuthuthukisa i-athikili yakho. Ngokunokwenzeka، akekho noyedwa ozokhononda ngalelo bhokisi elincane lendatshana elikhudlwana elisetshenziswa inqobo nje uma uma kufakwa kulo lolu hlobo noma ngendlela efanayo.
Lapho kunombuzo mayelana ne-Copyright nokuthi ingabe ukusetshenziswa kuyinzuzo enhle yomqambi wokuqala noma umphakathi، isilinganiso sibukeka silinganisa okuthe xaxa entshisakalweni yomphakathi.
Uma kukhulunywa ngezithombe، kungcono kakhulu ukunamathela ngezithombe zasebukhosini zamahhala nezesizinda somphakathi. Awukwazi ukusebenzisa ingxenye encane yesithombe futhi kunzima ukwazi ukuthi yikuphi ukusetshenziswa okuhle nokungenakwenza. Akufanele ngempela ukufaka engcupheni impi ende yezomthetho، edonswa lapho kunezithombe eziningi kakhulu ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhathazeka.
Ngokusho kochwepheshe bezithombe abaqeqeshiwe baseMelika، i-Copyright iyilungelo lomhlaba. Ukwengeza ، isayithi ithi, "Izithombe zokuphula umthetho-Copyright ngaphandle kwemvume-zingabangela izinhlawulo zomphakathi nezomthetho."
Ungenza konke okulungile futhi usebenzise amasayithi kuphela abhalisa المشاع الإبداعي Creative Commons.
Okungenzeka ukuthi umthwebuli wezithombe angaqale anikeze isithombe ngesibalo esilula kepha kamuva aguqule imithetho bese edinga ukukhokhelwa ukusetshenziswa kwesithombe.
Okokuqala، kubalulekile ukugcina amanothi wokuthi usithathe kuphi isithombe ekuqaleni nokuthi isitatimende sasithini ngamalungelo.
Okwesibili ، uma i-photographer icela yona ، masuse isithombe ngokushesha. Mbuyisela emuva nge-imeyili uphinde uchaze ukuthi ulayishe isithombe ku-X usuku futhi kunikezwe njengoba kushiwo، kodwa ususe isithombe.
هلونيفا. Kungenzeka ukuthi othile uthathe isithombe sakhe kuqala noma ukuthi umane nje ukhohlwe ukuthi uyinikele ngomsebenzi. Umthwebuli oyedwa ongathatha izithombe angathatha izinkulungwane zezithombe ngonyaka futhi kunzima ukuhambisana nabo bonke.
Uma ulandela le mithetho elula، kufanele uthole izithombe eziningi eziphezulu zebhulogi yakho futhi ungahambi ezinkingeni. Zithokozise ukuthola lezo zithombe ezikhuluma ngamazwi we-1000 futhi uthuthukise izihloko zakho.